Yaa dhahay Soomaalida wiilashooda Romantic am ahaan -Daawo | shumis.net
Home » galmada » Yaa dhahay Soomaalida wiilashooda Romantic am ahaan -Daawo
Yaa dhahay Soomaalida wiilashooda Romantic am ahaan -Daawo
Habab kala duwan ayaa lagu helaa macaanka gariirka galmada , iyadoo ciyaar sariireed isu dheeli tirin lagu heli karo hababkaan soo socda.
Qaabka Faarisiga ah : Habkaan haween waliba waa ay jecel yihiin , waa hab haweeneyda u ogalaaneysa in ay iyada ahaado qofta ka mas`uulka ah cayaarta , waana in ninka uu ku jiifato dhabarkiisa halka haweneyda ay iyada sara mareyso.
Habkaan haweeneyda iyada ayaa is maamuleysa halka gacamahedana ay saareyso xabadkiisa , waxa uu ninka sidoo kale sii xoojin karaa xaraarada kacsiga lamaantiisa maadama uu ku cayaarayo labada naasood .
Habka caalamiga ah ee caadiga ah: waa hab inta badan la isticmaalo , haweeneyda ayaa dhabarkeeda ku seexaneeysa iyadoo labadeeda bowdana kor u qaadeysa , waxa ayna tani sahleysa in dhunkashada kulul la is weydaarsado.
Habka galmada fog: habkaan galmada waxa ay ka dhigeysa mid xiiso oo xaraarad kulul leh , waxa ay haweeneyda ku jiifaneysaa dhabarkeeda iyadoo gacmaheeda ku soo qabaneysa madaxiisa , waxa ayna labadeeda bowdo ku qabaneysaa oo ay ku dhajineysaa xabadkiisa (geesaha labada kili)
Habkaan waxa ay ninka iyo naagta u sahleysaa in macaan fog ay helaan , balse ogaaw haweenka cayilan iyo kuwo uurka leh waa ku adag tahay in ay sameeyaan habkaan.
Habka Fool Ka Foolka Ah: habkaan waxa waaye in haweeneyda ku fariisato sariirta geeskeeda ama kursi balse waxaa muhiim ah in fadhigas uusan ninka ka dheereyn joog ahaan
Habka Cagta :haweeneyda waxa ay ku jiifaneysa kursi ama miis iyadoo sara u qaadeysa lugaheeda halka ninka uu isagu oo taagan uu jugta sameynayo isla markaana uu isaga kor u qaadanayo marb hoos uu u dhigayo bowdadeeda.
Habka fadhiga Gadaalka ama dambe :habkaan waa qatar ninka waa uu jiifanayaa halka haweeneyda ay ku kor fariisaneyso balse waa in dhabarkeeda ku aadanaa wajigiisa iyana ay eegeyso cagahahiis .
riix halkaan ka daawo wiil iyo gabar baashaalaayo
Title: Yaa dhahay Soomaalida wiilashooda Romantic am ahaan -Daawo
Posted by Unknown, Published at June 03, 2016 and have 0 comments